विश्ववासीका लागि एउटा अनिश्चित प्रश्न : सामाजिक दूरीको मर्यादा कहिलेसम्म ? « News24 : Premium News Channel
विश्ववासीका लागि एउटा अनिश्चित प्रश्न : सामाजिक दूरीको मर्यादा कहिलेसम्म ?
काठमाडौं, ९ जेठ । कोरोना भाइरस विश्वका लागि एकदमै नयाँ भाइरस हो । यो भाइरसको उत्पति कसरी भयो रु, यसको उपचार के होरु र, यो भाइरसको महामारी कहिले रोकिएला रु यो बारेमा अहिलेसम्म कसैले पत्ता लगाउन सकेको छैन । तर एउटा कुरा सय प्रतिशतले प्रमाणित भएको छ कि यसलाई सामाजिक दूरीले मात्र रोक्न सम्भव छ ।
एउटा अध्ययनका अनुसार स्पेनिश फ्लु भाइरसको प्रजनन क्षमता १.८ रहेको छ। इन्फ्लुएन्जा भाइरसको क्षमता १.०६ बाट देखि ३.४ छ । जबकि नजिकको रिनोवा वायरसमा प्रजनन क्षमता १.२–१.८३ छ । उही समयमा, कोरोनामा प्रजनन क्षमता १.४ देखि ३.९ छ, जुन सबै प्रकारका भाइरसको तुलनामा उच्च हो।
आज हामी टेक्नोलोजीको सुनौलो चरणमा छौं, जहाँ टेक्नोलोजी मार्फत हामी एकै समयमा सम्पूर्ण विश्वसँग सम्पर्क गर्न सक्दछौं। कोरोनालाई हटाउन र स्वस्थ रहनका लागि लामो समयको सामाजिक दूरी बनाउनु महत्त्वपूर्ण छ । बीबीसीबाट